Coin Magi စျေး - အွန်လိုင်း XMG ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Coin Magi (XMG)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Coin Magi (XMG) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Coin Magi ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $229 147.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Coin Magi တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Coin Magi များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Coin MagiXMG သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0323Coin MagiXMG သို့ ယူရိုEUR€0.0275Coin MagiXMG သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0248Coin MagiXMG သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0296Coin MagiXMG သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.295Coin MagiXMG သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.205Coin MagiXMG သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.719Coin MagiXMG သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.121Coin MagiXMG သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0432Coin MagiXMG သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0452Coin MagiXMG သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.736Coin MagiXMG သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.251Coin MagiXMG သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.172Coin MagiXMG သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.43Coin MagiXMG သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.39Coin MagiXMG သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0445Coin MagiXMG သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0489Coin MagiXMG သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1Coin MagiXMG သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.226Coin MagiXMG သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.42Coin MagiXMG သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩38.64Coin MagiXMG သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦12.27Coin MagiXMG သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.38Coin MagiXMG သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.899
Coin MagiXMG သို့ BitcoinBTC0.000003 Coin MagiXMG သို့ EthereumETH0.00008 Coin MagiXMG သို့ LitecoinLTC0.000564 Coin MagiXMG သို့ DigitalCashDASH0.000376 Coin MagiXMG သို့ MoneroXMR0.000374 Coin MagiXMG သို့ NxtNXT2.68 Coin MagiXMG သို့ Ethereum ClassicETC0.00456 Coin MagiXMG သို့ DogecoinDOGE9.35 Coin MagiXMG သို့ ZCashZEC0.000394 Coin MagiXMG သို့ BitsharesBTS1.25 Coin MagiXMG သို့ DigiByteDGB1.25 Coin MagiXMG သို့ RippleXRP0.108 Coin MagiXMG သို့ BitcoinDarkBTCD0.00115 Coin MagiXMG သို့ PeerCoinPPC0.117 Coin MagiXMG သို့ CraigsCoinCRAIG15.26 Coin MagiXMG သို့ BitstakeXBS1.43 Coin MagiXMG သို့ PayCoinXPY0.584 Coin MagiXMG သို့ ProsperCoinPRC4.2 Coin MagiXMG သို့ YbCoinYBC0.00002 Coin MagiXMG သို့ DarkKushDANK10.74 Coin MagiXMG သို့ GiveCoinGIVE72.5 Coin MagiXMG သို့ KoboCoinKOBO7.63 Coin MagiXMG သို့ DarkTokenDT0.0298 Coin MagiXMG သို့ CETUS CoinCETI96.65
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 16:55:02 +0000.